Na-eji saịtị Cannabis na saịtị - Mkpesa ikpeazụ nke Marijuana Machibidoro ịda
Jiri Cannabis na saịtị ahụ
Gini bu Social Use of Cannabis?
Jiri Cannabis rụọ ọrụ na saịtị ma ọ bụ Social Cannabis ọ dịla anya ejikọtara ya na ihe na-adịghị mma, site na isi ya ruo na mmetụta ọjọọ ọ na-akọ na ahụ mmadụ. N'agbanyeghị cannabis ghọrọ usoro iwu dị na iwu ma ọ bụ ihe ntụrụndụ n'ọtụtụ steeti, ojiji ọhaneze ma ọ bụ nke mmekọrịta ọhaneze ka bụ iwu na-akwadoghị. Nke a bụ nsonaazụ a na-akpọ stewma nke enyere n'iwu kemgbe 1937, yana nyocha pere mpe ga-abanye na uru ọ bụla nke afọ ọ bụ naanị ka a kwadoro ka ịchọta mmetụta na-adịghị mma yana mmebi nke cannabis. Maka nke a, Israel na ọbụghị United States ka bụ ebe izizi nke sayensị cannabis.
Gịnị bụ ebe maka a na-akpọ ojiji ọhaneze?
Ajuụ wii wii
Klọbasị Nri Cannabis
Coffeelọ ahịa kọfị Cannabis (Amsterdam)
Ogwe Ọkụ Cannabis / Pubs
Njikwa Obodo & Ndị Ahịa Cannabis Social
Gụọ Edemede Thomas na Social Use of Cannabis na Cannabis Iwu & Regulation Reporter - Ebe a.
Ndị ọchụnta ego Cannabis kwesịrị ileba anya na Ntuziaka General achọpụtara n'okpuru Nkeji edemede 55 nke Iwu ọhụrụ Cannabis Iwu na newtụ Isi (Iwu ahụ), 410 ILCS 705 / 55-25. Ka anyi tinye ya na peeji a:
(3) Otu ọchịchị ime obodo, gụnyere iwu obodo
Ngalaba, ma ọ bụ mpaghara ọ bụla na-abụghị ụlọ obibi n'ime mpaghara a na-achịkwaghị achịkwa nke County nwere ike ịhazi oke n ’ụlọ nke cannabis na ma ọ bụ na ntọala azụmahịa cannabis n'ime ikike ya n'ụzọ n'ụzọ kwekọrọ na Iwu a. Aghazigharị azụmaahịa azụmaahịa ma ọ bụ ihe ọzọ nke ikike ọchịchị obodo nyere ikike ịbanye na saịtị ahụ agaghị echekwa ebe ọhaneze nọ na ntuli aka nke anwụrụ ọkụ Illinois Illinois.
-Lọ oriri na ọ ofụ ofụ nke Iwu cannabis
Ngalaba ahụ kwere ka ọ bụghị naanị “ụlọ ọrụ azụmahịa cannabis” ka ha nwee oriri na saịtị ahụ, kamakwa ha nwe ụlọ ọrụ gọọmentị obodo ahụ nyere ikike. Iwu ahụ kọwara “ụlọ ọrụ azụmahịa cannabis” n’okpuru Nkọwapụta ya dị ka azụmaahịa ikike ikike cannabis ọ bụla. Iwu a gara n'ihu ma na-enyekwu ikike ikike ime obodo ka ịgbatị cannabis na-eji saịtị karịrị azụmahịa azụmahịa cannabis, dị ka ndị na-ekesa akwụkwọ, iji banye ikike ọ bụla.
Gọọmentị ime obodo na-enweta ọtụtụ ikike mgbe a bịara n'iwu cannabis, agbanyeghị na steeti na-esetịpụrụ ụkpụrụ nke iwu. Imirikiti steeti na-ahapụ ime obodo idobe ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ikike cannabis na ikike ha. Ọ bụ ezie na Illinois nwere steeti ikike maka ikikere ikike cannabis, otu ime obodo nwere ike ịtọ "usoro ịtụnanya ịtụnanya" iji hazie ụlọ ọrụ azụmahịa cannabis.
Gọọmentị ime obodo nwere ike machibido ụlọ ọrụ azụmahịa cannabis ma nwee ụkpụrụ ndị ezi uche dị na ya gbasara ọnụọgụ ha, anya site na mpaghara ndị obodo lere anya na oge ndị ọzọ, ụkpụrụ na usoro.
Inwe ezi uche na-abụkarị nyocha siri ike dabere na ọnọdụ, mana ọ na-enyekwa gọọmentị ime obodo ụzọ ọhụrụ na ụzọ ike iji zụlite azụmaahịa ndị metụtara cannabis ma mepụta ego ha.
analogis kpokọtara ọdịnala ndị mmadụ na-eji ohere ọ isụ isụ eme ihe bụ ihe ọ thatụ servesụ na-aba mmanya. Ọtụtụ mgbe, obodo anaghị enwe naanị otu iwu maka mmanya.
Nyochaa emume m n’obodo m mere ka ikike inweta ihe ọ liquụorụ klas nke A ruo na nke L, na klas asaa ọzọ. Cannabis na-ewetakwa ngbanwe dị iche iche maka ikikere iji ọha na eze, yana ike karịa.
Ndi ime obodo nwere ike ikari ahihia cannabis ebe ndi mmadu nwere ike irichapu ahihia cannabis naanị n'ihi profaịlụ nchekwa nke na - esonye oge dị mkpirikpi nke nsonazụ ọkụ cannabis, mana ị barụ mmanya. Ma ọ bụ obodo nwere ike nwekwuo ike, kọwaara ya ihe ezi uche dị na ya, ụkpụrụ metụtara ọhaneze oriri nke ngwaahịa cannabis iji nye ndị ọzọ nchekwa na dosing. Udiri nghota nwere ike ime na ndi mmadu anaghi eji usoro oriri di iche na oge oriri di iche di iche nebe ahihia. Muta ihe ndi n’ere ahia na ndi mmadu n’obere no na-adiro na nkwaghari na n’iwu inweta mmebi iwu na ezi uche.
Ọzọkwa, Iwu ahụ ekwughi hoo haa maka klọb nri oriri cannabis ebe ndị ọchị na-akwadebe nri cannabis ọhụrụ nye ndị ọbịa. Ikekwe ụkpụrụ ezi uche dị na saịtị ahụ nke obodo anyị setịpụrụ ga-eweta ụzọ iji mezuo ihe ndị ahụ. N’ezie, nanị ụlọ na-akwụ ụgwọ agaghị enwe ike inye ya efere. Na mgbakwunye, iwu maka Iwu a abụghị ọtụtụ ọnwa. Oge ga-ekwu maka iji mmekọrịta cannabis na-elekọta mmadụ na Illinois na-adabere n'ihe gọọmentị ime obodo kpebiri ime na cannabis na obodo ha.
Dịka emume ị theụbiga mmanya oke na nhazi ha dị ka akwụkwọ ntuziaka maka ihe ga-ekwe omume na iji cannabis, yana ojiji sara mbara nke okwu a "ikike kwadoro" n'okpuru Iwu ahụ maka ndị nwere ike ịnwe oriri na saịtị, oke nke igwe. Amachibidoro iji ọha eme ihe, mana ikekwe ihe omume onwe, dị ka ememme egwu, nwere ike iru eru maka akwụkwọ ikike cannabis pụrụ iche. Ikekwe onye na-ahụ maka ịhịa aka na mpaghara nwere ike ịmalite iji usoro ọgwụgwọ cannabis na ndị ọrịa. Klaasị Yoga nwere ike ịnwe mmemme na njikọta nri dị mma maka asịrị gị. Achịcha ndị na-ahụ maka achicha oghere ma na-ejide ma canusis infuser na ikikere nnyefe ikike nwere ike ịbụ otu ụbọchị.
Ọdịiche dị n'etiti Ọrụ & Azụmaahịa nke Ọgwụ Cannabis
Ikikere oha obodo ime obodo pụtakwara inwekwu ego n’obodo. Ndị na-ere ahịa na-akwụkarị ụtụ isi maka biya na mmanya ha na-ere. Iwu ahụ nyere ego maka ụtụ isi maka steeti na obodo niile site na ire nke cannabis na ebere. Ikekwe ndị obodo nwere ike ịnapụ ụtụ ego site na ire a na-ere nri dị n'ụlọ oriri na ọ assụ -ụ, na-ewere Iwu na usoro iwu ya na-abịanụ wee kwe ka ụdị nri ahụ nye. Kedu maka onye na-ahụ maka ịhịa aka n'ahụ nke chọrọ iji cannabis na-eme ka uru ahụ na-egbu mgbu? Ọ ga-abụrịrị ọrụ n'ihi na ọ ga - ere naanị cannabis nwere ike ire ere. Agbanyeghị, ndị ime obodo nwere ike ikwụọ ụgwọ ikike maka ojiji dị otú a ma ikekwa hazie ego nke THC na ihe mgbu ahụ. N’ọdịnihu, n ’ebe a na-a consumptionụ ihe ọ willụ willụ ga-ewetara ime obodo ohere inwetakwu ego na ụtụ ahịa.
Ma eleghị anya, otu ụbọchị ụtụ isi ga-abụ ihe kachasị ọnụ na cannabis, dị ka maka biya tupu ya. Nke ahụ ga-ewe ọtụtụ mgbanwe mmezi iwu na cannabis iwu, mana cheta na ọbụlagodi na 2019 ndị States gafere narị narị mmezi nke iwu mmanya. Mgbanwe na ọkwa omebe iwu na-ewe oge, mana anaghị akwụsị akwụsị.